That's so good, right?: My First Sex In A Men's Public Restroom: Part 2
ကျွန်တော် နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းမှာ ထူးထူးခြားခြား အိပ်ရေးဝစွာနိုးထခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီး နှစ်ယောက်မြောက်နေ့ပေါ့။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှားနေတာတွေဟာ နည်းနည်းများမြန်နေမလားပဲ။ တစ်ချိန်လုံးလိုလို တွေးနေမိတာကတော့ ဒီနေ့ မဟုတ်တဲ့ မနေ့က အမည်မသိလူရဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို -ုပ်-ှုတ်ပေးစဉ်ခံစားရတဲ့ ကြက်သီးထမတတ်ခံစားချက်မျိုးအကြောင်းပေါ့။ ကဲ… တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အမြန်လုပ် အ၀တ်လဲ Honda Super 90 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကိုခွကာ အိမ်ရဲ့အဝေးကို ထွက်ခွာခဲ့ပါ ရော။
Ahmm Hamm….ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ထပ်တွေ့ကြုံရမယ့် sexual experience ကဘာများပါလိမ့်။ Yep, နောက်တစ်နေ့ပါပဲ။ (ဒုတိယနေ့ဟာ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားမိတာထက် ပိုမိုသောအတွေ့အကြုံသစ်တွေကို တစ်နေ့တာလုံး ခံစားရသား) ။ ဒါပေမဲ့ ဟေး…. အဲဒီနေရာကို ကျွန်တော် ပြန်သွားခဲ့တာပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်စီးနေတုန်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို မှတ်မိနေတာ။ မနေ့ကလူတွေနဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာ ပြန်တွေ့ခဲ့ရင်ဘာတွေများဖြစ်လာမလဲ? ပြီးတော့ ကြောက်တော့မကြောက်မိပေမဲ့ မြေအောက် အမျိုးသား သန့်စင်ခန်းရှိရာကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သွားရတာ နည်းနည်းတော့ လန့်မိသားပါ။ ဆိုင်ကယ်လေး တငြိမ့်ငြိမ့်စီးလာရင်း ဟိုတွေး ဒီတွေးနေမိပေမယ့် ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားကညီဘွားက နောက်တစ်ကြိမ် blowjob လုပ်ပေးတာကိုခံယူဖို့အသင့်ဖြစ်ကြောင်း တဆတ်ဆတ်တုန်လာရင်း မာတောင့်လာပါတယ်…ဟင်း။
ဆိုင်ကယ်ကို သေချာနေရာတကျရပ်ပြီးသော့ခပ်….ပြီးတော့ မြေအောက်ချိုင့်ထဲမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားသန့်စင်ခန်းရှိရာကို လျှောက်လှမ်းတာ ပေါ့ ရင်တခုန်ခုန်နဲ့လေ။ သန့်စင်ခန်းကိုဝင်ရာ ၀င်ပေါက်တံခါး မြင်နေရတာတောင် ခြေလှမ်းတွေက မရောက်နိုင်တော့ဘူးပုံစံတွေးထင် ရတဲ့အထိ ဒူးတတုန်တုန်။
တံခါးပေါက်နားမရောက်ခင် မှောင်ရိပ်နားမှာ မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်လားမသိဘူး ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့ဘက်ကို မျက်နှာမူကာ လက်ပိုက်ရပ်နေတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်ဆင်းလာစကတည်းက သူလှမ်းကြည့်နေတာလားဗျာ။ ဒါပေမဲ့ မသေချာပါဘူးလေ မနေ့ကဒီမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့လူတွေထဲက တစ်ယောက်ဆိုတာ။ သူ့ကိုမြင်မှပဲ နည်းနည်းလေးသာကျန်တော့တဲ့ လှေကားထစ်တွေကိုနင်းရတာ မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့နှလုံးတွေက တစ်နာရီကို မိုင်၉၀နှုန်းလောက်ခုန်နေတာ…အာ…ငါ့ကောင်….စိတ်လှုပ်ရှားပြီး လန့်နေတာ ကြောင့် လှေကားထစ်လေးတွေကိုဆင်းရတာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ် ခြေထောက်တွေကလေ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲဝယ် အတွေးတစ်ခု တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ မနေ့က ဒီသန့်စင်ခန်းကို ဘာအတွေးဘာအကြံအစည်မှမရှိဘဲလာဖြစ်တယ် ပြီးတော့ မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ (ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့) ဒီနေ့တော့ ဘာတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရမလဲ ဘာတွေဖြစ်ပျက်လာမလဲ စိတ်ထဲ ရင်ခုန်နေပြီ။
ကျွန်တော် ရှည်လျားကျယ်ဝန်းလှတဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲလှမ်းဝင်သွားချိန်မှာတော့ ဘဲခုနှစ်ပွေလောက် လူသွားလမ်းတစ်လျှာက်ရပ်နေကြ တယ်။ မနေ့ကလူဦးရေထက် နည်းနည်းများတာပဲ။ သူတို့ထဲက ဘယ်သူတွေ မနေ့ကရှိခဲ့သလဲ မမှတ်မိသလို သူတို့ကိုရဲရဲမကြည့် ရဲသလိုဖြစ်နေတာ။ လှမ်းလက်စခြေလှမ်းကို ခဏရပ် လူသွားလမ်းအတိုင်းလှမ်းသွားလိုက်ရင် သို့မဟုတ် ဆင်းလာတဲ့လှေခါးအတိုင်း ပြန်တက်သွားရမလား စက္ကန့်အနည်းငယ်တော့ တွေဝေမိရော။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟော်မုန်းတွေကထကြွလာတယ်လေ။ ကျွန်တော် အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှိုက်လိုက်ပြီးတော့ လူသွားလမ်းအတိုင်း လှမ်းသွားလိုက်ပြီး အိမ်သာတံခါးတွေရှေ့ဖြတ်လျှောက်လိုက် တာပေါ့။
ဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိ ကျွန်တော် အိမ်သာအခန်းနံပါတ် 17 ရှိရာကိုပဲပြန်သွားမိတယ်။ ဖြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေထက် အခန်း 17 က လူမရှိတဲ့ အရိပ်အယောင်ပြနေလို့လားမသိ။ အရပ် ခပ်မြင့်မြင့်နဲ့လူတစ်ယောက် ကြမ်းတိုက်တုတ်တံနဲ့ကြမ်းပြင်ကိုသန့်ရှင်းနေရင်း အပြင်ကိုထွက်လာပြီးနောက် ``အဲ….ဒီဘက်ခြမ်းရဲ့အဆုံးကအခန်းကိုသုံးလိုက်ပါလား´´လို့ပြောတယ်ဗျ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော် ရှည်လျားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အဆုံးထိကိုလျှောက်သွားလိုက်တာပေါ့။ တံခါးရွက်တစ်ခုက ခပ်ဟဟပွင့်နေတာကိုမြင်တာကြောင့် ၀င်သွားလိုက်ကာ တံခါးကိုလော့ခ်ျလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အရမ်းပူတဲ့ June လရဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တာကြောင့် ဂျင်းဘောင်းဘီပြာ ဒူးဆစ်လောက်နဲ့ တီရှပ်အရောင်ခပ်ဖျော့ဖျော့ကို ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါ။ ဘောင်းဘီကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲလျောချပစ်ကာ ကြွေကမုတ် ပေါ် အသာထိုင်ရင်း သေးပေါက်ဖြစ်သပေါ့။
ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ လူအတော်များများဟာ ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ အိမ်သာအခန်းဝတံခါးနားကိုလာ အပေါက်ဝလေးကနေ ကျွန်တော့်ကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ကြတာများဗျာ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းသေချာ မသိဘူး။ နောက်တော့ မနေ့က ဘေးအခန်းမှာဝင်ထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဘေးပေါက်လေးကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုသတိရ တယ်။ သူ့ငပဲကိုအားရပါးရကိုင်ပြီး လက်ကစားနေခဲ့တာကိုး။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုလုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာလေးကို မသိတော့ပါ။ ဘေးအခန်းက အိမ်သာတံခါးရွက်မြည်သံကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ မကျယ်တကယ်အပေါက်ကနေ ကျွန်တော် ကပ်ချောင်းလိုက်တော့ သေချာတယ် ဘဲတစ်ပွေဝင်လာတာ။ ရင်တစ်ချက်ခုန်ကာ အိမ်သာကြွေကမုတ် tank လေးကိုမှီချ လိုက်တာ မှာ မာစပြုနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မင်းတို့လက်တွေလေထဲမြှောက်ထားလိုက်စတိုင်လ်ကိုဖြစ်ကရော။ ငပဲက တဖြေးဖြေးမာတောင့်ပြီး အပေါ်ကို တန်းမတ်နေတာလေ။ အိမ်သာခန်းရှေ့တံခါးရွက်အပေါက်ကို တခြားဘဲတစ်ပွေချဉ်းကပ်လာပြီး အပေါက်ကနေ ကျွန်တော့်ကို ချောင်းတယ်။ ကျွန်တော်မသိမသာcheckလိုက်တော့ သူ့မျက်လုံးတစ်လုံးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုံးပျံကို အထက်အောက်ကြည့်နေတာဗျာ။ အဲ့လူက တံခါးရွက်နားပိုတိုးကပ်ပြီး အပေါက်ကနေတစ်ဆင့် ပြောလိုက်တာက ``တော်တော်မိုက်တဲ့ -ီးပဲကောင်လေး´တဲ့။ ကျွန်တော် လန့်လဲလန့် စိတ်လဲလှုပ်ရှားသွားတဲ့ သူက ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘေးအပေါက်ကနေ ထိုးထည့်ပေးလို့ပြောလိုက်မလားလို့ မနေ့ကလို လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုတစ်ယောက်ယောက်က -ုပ်-ှုတ်ပေးလို့ရမယ့်ဖီလင်ကို မျှော်လင့်နေတာကိုး။ အဲ ဘေးအခန်းက ငနဲက အိမ်သာခန်းထဲကနေထထွက်သွားတယ်ဗျ။
အခုတော့ ဘယ်လိုလည်းမသိ မနေ့ကနဲ့မတူဘာတွေကွဲပြားစွာတွေ့ကြုံရမလဲဆိုတာလေ။ ``မတ်တပ်ရပ်စမ်း ကောင်လေး´´ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့စကားသံနဲ့အတူ ကျယ်လောင်တဲ့ တံခါးခေါက်သံကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အိုး…..မနေ့ကလူကြီးပဲလား မသိဘူး။ ဟုတ်တယ် မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ ဗမာစကားမပီမသ တိုင်းရင်းသားသံဝဲ၀ဲနဲ့ ခပ်ထွားထွားလူကြီး။ Yep သူက ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ကို ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်အောင်ထိတ်လန့်စေနိုင်တုန်းဆိုတော့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်တယ်။ သူက `` တံခါး ကိုလာခဲ့´´ ဆိုတော့ အပေါက်လေးကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံးကိုမရဲတရဲပြန်ကြည့်ရင်း တံခါးဝဆီလျှောက်သွားလိုက်တယ်ဗျ။ အဲ့ဒီလူကြီးက ``မင်း ဒစ်ကိုအပေါက်ကနေထိုးထည့်လိုက်``ပြောပြန်တော့ ကျွန်တော် ဒီလူဘာပြောနေတာလဲ အလုပ်မဟုတ်တာလို့ တွေးမိတယ်။ ဟိုသည်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ တံခါးရွက်ရဲ့ ကျွန်တော့်ခါးအမြင့်လောက်နေရာမှာ တော်တော်ကြီးတဲ့အပေါက်တစ် ပေါက်က ရှိနှင့်နေသား သပ်ရပ်တဲ့အဖုံးလေးတစ်ခုနဲ့ကွယ်နေတာကိုး။ ဒီလောက်လူတွေ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့လူသွားလမ်းတလျှောက်က မြင်သွားမှာပေါ့ ကျွန်တော့် -ီးကို တံခါးရွက်အပေါက်ကနေထိုးထည့်လိုက်ရင် ရှင်းရှင်းကြီးနော်။ ကျွန်တော် ဆက်မလှုပ်ရှားမိတော့။
တိုင်းရင်းသားသံဝဲနေတဲ့ ခပ်ထွားထွားလူကြီးက ငြင်သာမှုမရှိ ကျွန်တော့်ကိုအော်ရော။ ``အပေါက်ကနေ မင်း-ီးကိုထိုးထည့်လေကွာ´´ ကျွန်တော် တံခါးရွက်နားတိုးကပ်မိပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရပ်နေမိတယ်ပေါ့။ လူကြီးက အော်လိုက်တာများ တကယ်ကျယ်တယ်… `` အပေါက်ကနေ ထိုးထည့်လိုက် -ီးကို´´။ သူ့အသံက ကျွန်တော့်ကို ရှေ့တိုးပြီးဆက်လုပ်စရာရှိတာလုပ်ဖို့ သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်နေတဲ့ ကျွန်တော့ငပဲကို တံခါးရွက်ရဲ့ အပေါက်ကြီးထဲကို ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပါရဲ့။ အဲ့လူကြီး တစ်ခြားလူတွေကိုပြောလိုက်သော အသံသြသြကိုကြားလိုက်ရတယ် ``မပြောဘူးလား ဒီကောင်လေး-ီးကတော်တော်ထွားပါတယ် ဆိုတာ´´။ တခြားဘဲတစ်ပွေက ``အင်းဗျ….တော်တော်လှတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲ´´တဲ့။ နောက်တစ်သံက ``အေးကွ…ထွားပြီး နုသေးတဲ့ -ီးကြီးပဲနော်´´ဆိုပြန်တယ်။
နောက်တော့ သူတို့တွေဘာကိုသဘောကျတယ်မသိဘူး ရယ်မောလိုက်သံကိုကြားရတယ်။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဘေးတံခါး မဟုတ်တဲ့ ရှေ့တံခါးရွက်ကအပေါက်ထဲကို ဒီလိုကြီးထိုးထည့်ပြီးရပ်နေရတာ ရှက်လာပြီ။ သူတို့တွေ အကုန်လုံး ကျွန်တော့်ငပဲကို ၀ိုင်းကြည့်နေမှာကိုသိတာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားသလို ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ သိချင်မိပါတယ်။ ခဏနေတော့ flash မီးတစ်ချက် လက်သွားသလို နောက်ထပ်နှစ်ချက်ကလည်း ဆက်တိုက်လင်းသွားကြတယ်ဗျ။ သိလိုက်ပြီ သူတို့ကျွန်တော့်ငပဲကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးယူ နေကြတာ။ တံခါးရှေ့ကိုထိုးသွင်းလိုက်ဖို့ပြောတဲ့ လူထွားကြီးက သူ့လက်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော့်-ီးကို ဆွဲကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ချက် လောက်အထက်အောက်ကစားပေးပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုပါဆွဲကိုင်ပါရော။ ခဏနေတော့ ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ညှစ်တယ်။ ပထမတော့ သိပ်မနာဘူးထင်မိပေမဲ့ သူ့ညှစ်ပြုမှုကြောင့် တော်တော်အောင့်သလိုလို နာသလိုလိုဖြစ်သွားတာကြောင့် အပေါက်ထဲထိုးထဲ့ ထားရာကနေ နောက်ဆုတ်ပြီး ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်လေ။
လူကြီးဆီက အော်သံထွက်လာရော ``ပြန်ထုတ်လိုက်´´ ကျွန်တော့်မှာ သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရရော။ နောက် အသံသိပ်မကျယ်ပေမဲ့ အံကြိတ်ပြောတဲ့ အသံတစ်သံ ``မင်းကို ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ် ကောင်လေး´´လို့ အဲ့ဒီလူကြီးကပြောတာ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကျွန်တော့်ထက် သုံးဆလောက်ကြီးတော့ သူပြောသမျှလိုက်လုပ်ဖြစ်လောက်အောင် သူ့ကိုကြောက်လန့်မိတုန်းပါပဲ။
သူ ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့် ငပဲကိုကိုင်ကာ -ီးပါတော့တယ်။ `အို…အို…အိုး´ ဒီဖီလင်မျိုးရချင်လို့….အ…အ ကျွန်တော့် -ီးကို သူတို့ပြုစုပေးတဲ့ အမြင့်ဆုံးဖီလင်ကိုရပြီး သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်ချင်လို့ ပြန်လာခဲ့တာ…အာ။ ကျွန်တော် နောက်ပြန် ဆုတ်လို့မရအောင် သူချုပ်ကိုင်ထားတာ ပြီးတော့ ပူနွေးစိုစွတ်နေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲမယ် ငပဲအရှည်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးကို တင်းကြပ်နေအောင် လျှာတွေ အာတွေနဲ့ထိန်းရင်း မျိုချလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်ကစားလိုက်တာများ ငါးမိနစ်တောင်မကြာဘူး ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားက ဇာတ်သိမ်းကာနီး ဖီလင်အမြင့်ဆုံးအချိန်ဝယ်ထွက်မိတတ်တဲ့အသံမျိုး ထွက်မိပါရော။ အံ့အားသင့်စရာ သူ ဆက်မ-ုပ်တော့ပဲ ရပ်တန့်လိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ အို….Shit…မယုံနိုင်အောင်ဘဲ ကျွန်တော်ပြီးကာနီးမှ သူကရပ်ပစ်လိုက်တာ။ မာတောင့်ရှည် လျားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီး နှလုံးခုန်သံနှင့်အတူ ထက်အောက်ခါရမ်းနေမှာလို့ခံစားမိရပါတယ်။ အိမ်သာလျှောက်လမ်းကြားထဲကလူ တွေအကုန် အဲတာကိုဝိုင်းကြည့်နေမှာ ကျွန်တော်သိပေမဲ့ ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ကြိုးစားတာမရခဲ့ပါဘူး.....အရမ်းကို-ိုးချင်မိနေတာကိုး။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်လိင်တံတလျှောက် သုက်သွေးတွေဟာ slow motion နဲ့လှိမ့်ထွက်လာတာ လိင်တံထိပ်ဝလည်းရောက် ရော တစ်လျှော့ပစ်ထွက်လိုက် ပြီးတော့မှ နောက်တစ်လျှော့ ပန်းထွက်တာများ တစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အဲ တံခါးဟိုဘက်က ကျောက်သားကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ကျကုန်ရော။ အပြင်ကလူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်များဝိုင်းကြည့်နေလည်းမသိ တစ်စုတစ်စည်းထဲကြား လိုက်ရတာက ``Wow!!´´တဲ့။ ကျွန်တော့်ငပဲ ထိပ်ဝကနေ တကယ့်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် တစ်လျှော့ခြင်းထွက်တာကို သူတို့မြင်ခဲ့ မှကိုးနော် ``Cool….မိုက်တယ် ကောင်လေးပြီးသွားပြီ´´တဲ့။
ဟိုလူထွားကြီးမဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်က ``တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်´´တဲ့။ တံခါးလက်ကိုင်ဘု လှည့်ပြီး သော့ပွင့်သံ နှင့်အတူ တံခါးပွင့်သွားသံကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ``ထွက်ခဲ့ကောင်လေး´´လို့ပြောတော့ ကျွန်တော့်မှာ တော်တော် အံ့အားသင့်သွားပြီး အသံလေးတိုးတိုးနဲ့ ``ဘာလို့လဲဗျ´´မေးလိုက်မိရော။ သူက လက်ကိုဝှေ့ရမ်းပြီး ``ထွက်ခဲ့စမ်းပါ ကောင်လေးရာ´´ခေါ်ချိန်ထိ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတိုနဲ့ အတွင်းခံက ခြေချင်းဝတ်မှာဆိုတော့ ဆွဲတင်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့။ ``အဲဒါတွေကို ချွတ်လိုက်စမ်းပါ´´လို့သူကထပ်ပြောတော့ ကျွန်တော်လျှိုနေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုမလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူ ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီတွေအကုန် ကုန်းကောက်လိုက်ရောဗျာ။
မြင်လိုက်ရတာက အိမ်သာအခန်းတွေရဲ့ကြားလျှောက်လမ်းမှာ ၆ယောက်လောက်ရပ်နေကြတာ နှစ်ယောက်ကတော့ မနေ့ကလူတွေ ဖြစ်ပြီး တခြားလူတွေကတော့ လူသစ်တွေ။ ကျွန်တော် နှေးတုံ့နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အပြင်ကိုထွက်လိုက်တော့ မနေ့ကလူနှစ်ယောက် က `ဟေး´ လို့နှုတ်ဆက်ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီး `ဟေး´လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ လူထွားကြီးက ခါးအောက်ပိုင်း အ၀တ်မပါတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒီအတိုင်း သူတို့ရှေ့မှာလျှောက်စေချင်တော့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ အိမ်သာအခန်းတွေရဲ့အဆုံး ဘက်အပိုင်းကို သူက လက်ညှိုးထိုးပြီး ``အဲဒီ့နေရာကိုသွား´´တဲ့။ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ သာယာနေရာက စိုးရိမ်ထိတ်လန့် မိတဲ့စိတ်အခြေအနေဘက် ပြောင်းလဲရပြန်ပြီ။
သူ ဘာကြောင့် အိမ်သာအခန်းတွေရဲ့အဆုံးကိုသွားစေချင်တာလဲမတွေးတတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မကြာခင်တွေ့ရမှာပေါ့။ အဲ… အိမ်သာ အခန်းတွေမရှိတော့ပေမဲ့ အဲဒီနားမှာ စတိုခန်းတစ်ခန်းရှိနေခဲ့တယ်။ သစ်သားကုလားထိုင် တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တွေ့ရတယ် ကျောမှီကို နံရံဘက်မှာထားပြီ ချထားတာ။ ကြည့်ရတာ အိမ်သာစောင့်တွေရှိတုန်းက ရှူးဖိနပ်တွေ ပေါလစ်လုပ်ပေးတဲ့အပိုဝင်ငွေရှာ လုပ်ငန်းလေးရှိခဲ့ပုံပေါ်တယ် ခြေထောက်တင်ခုံအသေးလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်လည်းတွေ့ရတာကိုး။ ပြီးတော့ သစ်သားစားပွဲသေး လေးတစ်ခုကို အခန်းလေးထဲတွေ့ရပါတယ်။
ခဏနေက ဒီစတိုခန်းရှိရာကိုသွားခိုင်းတဲ့ ဦးဆောင်သူက အဲဒီအခန်းထဲကိုခေါ်လာတော့ တစ်ခြားလူတွေကလည်း လိုက်လာကြတယ်။ အခန်းကိုသူ လော့ခ်ျလုပ်လိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဘာပြောရမှန်းမသိ ဘာတွေဖြစ်လာမယ်မှန်း မသိတွေနဲ့အတူ နည်းနည်းကြောက်လန့်စိတ်ဝင်လာတာပါပဲ။လူတိုင်းကို ပြန်သတိထားမိအောင်ပြောရတာလောက် မုန်းတာမရှိပေမယ့် ပြောရရင် ကျွန်တော်က အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ပါ။ လမ်းပေါ်က ကိစ္စတွေကို သိပ်မသိပါဘူး။ လိင်ကိစ္စ အကြောင်းကို သိပ်ပြောလေ့မရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးခြံလေးထဲမှာ အဖေတစ်ယောက်ထဲနဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့တာဗျ။ ကျွန်တော်မသိတဲ့ လူ နှစ်ယောက်က အနားကပ်လာပြီး ကျွန်တော့်တီရှပ်ကိုဆွဲချွတ်ပေးတယ် ခေါင်းပေါ်ကနေအကုန်။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကော တီရှပ်ကော ချိတ်တစ်ခုမှာ သူတို့ချိတ်ထားလိုက်တယ်။ စတိုင်လ်မိမိဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ထားတဲ့လူက ခဏနေကပြောပြခဲ့တဲ့ ရှူးဖိနပ်တင်ပြီး ပေါလစ် တိုက်ရာမှာသုံးတဲ့ ခုံလေးပေါ်ကို ကျွန်တော်တက်ရပ်လိုက်ဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေက ကြမ်းပြင်ကနေ နှစ်လက်မ လောက်မြင့်နေပြီး ဦးခေါင်းကနော့ ခပ်နိမ့်နိမ့်မျက်နှာကျက်နဲ့ထိနေရော။ အင်း…..ခြေတင်ခုံလေးပေါ်ဝယ် အနီရောင် Red Ball Jet Sneakers တစ်စုံကလွဲလို့ အ၀တ်မပါဘဲ တက်ရပ်မိသားဖြစ်နေသည်ပေါ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ငပဲလေးခမျာ ပြန်မာတောင့်လာပြီး ရမ်းနေသလို ရှေ့တည့်တည့်ကို ညွှန်ပြနေပြီး ရွှေဥတွေကတော့ နည်းနည်းများနာနေ သလားပဲ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကမှ ပန်းထုတ်ထားတာကို သုက်ရည်အချို့။ လူကြီးတွေက အခန်းသေးလေးထဲ ကျွန်တော့်ပတ်ပတ် လည်မှာဝိုင်းလို့ စတိုင်လ်မိမိ ၀တ်စုံပြည့်နဲ့လူက အနားကပ်လာပြီး ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို တကယ့်ငြင်ငြင်သာသာလေးကိုင်ပြီး သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ကစားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ အနီရောင်ကနေ ခရမ်းရောင်တောင်သန်းလာပြီ။ သူက ကျွန်တော့်မျက်လုံးတည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း ပြုံးလိုက်ကာ ``မင်း -ီးကတော်တော်မိုက်တာပဲ ကောင်လေး´´တဲ့ပြောတာ။ အင်း… ကျွန်တော သူ့ပြောစကားအလိုက်အတိုင်း ပြန်ဖြေလိုက်ရမလား ဒါမှမဟုတ် ဘာပြောရမလဲ ခဏငြိမ်နေမိပြီးမှ ``ကျေးဇူးဗျ´´ လို့တုန့်ပြန်လိုက်မိပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ဆွဲဆွဲနေတာတာက မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကို ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်သလို မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေသလားထင်ရပါရဲ့။ တကယ့်ရွရွလေးပွတ်လိုက် အောက်ကိုအသာဆွဲချလိုက်လုပ်နေတာလေ။ မိနစ်အနည်းငယ် လောက်ကြည့်နေပြီးမှ သူ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ဖွင့် ကျွန်တော့် ငပဲထိပ်လေးအား တကယ့်ရွရွလေး အာ….ဖြည်းဖြည်းလေး-ုပ်ပါတယ်။ အခု မနေ့တုန်းကနဲ့ လုံးဝကွဲပြားစွာ…..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် ငပဲကို မနေ့တုန်းကဘယ်သူမှ ဖြေးဖြေးလေး ငြင်သာမှုနဲ့-ုပ်-ှုတ် တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးလေဗျာ။
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာနဲ့သရပ်တာတွေ အာခံတွင်းထဲထိ သွင်းတာ….ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အပြင်ရောက်တဲ့အထိပြန်ထုတ်တာတွေကို တကယ့်ကို ဖြေးဖြေးအေးအေးကိုလုပ်တာ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို တကယ် မရိုးမရွပိုဖြစ်စေတာအမှန်ပါပဲ။ ပါးစပ်ထဲကနေအပြင်ကိုထုတ် သူ့လက်နဲ့ထိပ်ဖျားကို ခပ်ဖွဖွကိုင်ကာ သုံးလေးချက်လောက် လက်ကစားလိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ငပဲကို ထိပ်ဖျားကနေ အဆုံးထိ သူ့ခံတွင်းတွင်မက လည်မျိုထဲထိရောက်အောင်ထိ နောက်တစ်ခါဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ပြန်ရော။ Oh My……ဘယ်လိုဖီလင်လဲမသိ ရင်ထဲကို ဟာဆင်းသွားတာပါပဲ။ တခါ ငပဲကိုအကုန်လုံးအပြင်ရောက်လုနီးပါးပြန်ဆွဲထုတ်လိုက် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ထိ တွေ့သွားတဲ့အထိပြန်ပြီးသွင်းလိုက်နဲ့ …အာ။ ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားက ``အိုး´´ဆိုတဲ့ အော်သံနဲ့အတူ သူလည်မျိုထဲ တကယ့်အကြီးစား သုက်ရည်တစ်ပွက်ကို စပန်းမိပြီ။
ကိုကိုစတိုင်လ်ခမျာ သီးမတတ်အသံတွေထွက်လာရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲကအမြန်ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သုက်ရည် တွေကို ပန်းထုတ်တုန်းဆိုတော့ သူ့မျက်နှာနှင့် လည်တိုင် ပြီးတော့ သူ့အ၀တ်တွေပေါ် တော်တော်များများကိုရွှဲသွားစေပါရဲ့။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ `ဆောရီး….ဆောရီးဗျာ အကို…..ဆောရီး´´လို့ပဲပြောမိပါတယ်။ အဲ့လူကဘာမှမပြော ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ပြန်တေ့လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလွှာတွေနဲ့ညှပ်ပြီး အတွင်းထဲ-ုပ်သွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝ လေးကို လျှာနဲ့သရပ်လိုက်ဆိုတာတွေကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ဆက်လုပ်ပါရော။ ကျွန်တော့်ငပဲထဲက ထွက်သမျှ သုက်ရည်တွေကို တစ်စက်မကျန်ရလေအောင် သူကြိုးစားနေတာလားမသိ။
မသိဘူးဗျာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး……ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စ ဒီဖီလင်ကိုလိုချင်လို့ မနေ့ကနေရာကိုပြန်လာခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲကနေ အသာဆွဲထုတ်ပြီးတော့ မျက်လုံးတွေနဲ့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ကာ ``မင်း - ရည်တွေ တော်တော်များတာပဲ ကောင်လေး´´ တဲ့။ ပြောလည်းပြီးရော သူ့ပါးစပ်ထဲပြန်ထည့်ပြီး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မက -ုပ်-ှုတ်တယ် နောက်တစ်ခါ။ ``Mmmm.. မင်း - ရည်တွေက ချိုနေတာပဲ´´။ စတိုင်လ်ကိုကိုရဲ့ မျက်နှာအနှံ့ရယ် အ၀တ်တွေပေါ်ရယ် ကောင်းကောင်းဖျန်းနိုင်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့ညီဘွား ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို ဂုဏ်ယူမိသလိုလိုပါ။ အဲ….ကျွန်တော့်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်းကောင်လေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ရှေ့ကိုတိုးလာ တယ်ဗျ။ ပြောရရင် ကျွန်တော့်ငပဲက ပျော့မသွားသေးဘူး မာတောင့်နေဆဲ အရှေ့ကိုလမ်းညွှန်နေဆဲကိုး။ သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖွင့် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ထက်ကြီးတဲ့ သူ့ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ကာ လက်ကစားပြပါတယ် အထက်အောက်ပေါ့နော်။
သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ငပဲအောက်ငုံ့….ပြီးတော့ ရွှေဥနှစ်ခုလုံးကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ငုံထွေးတော့တယ် တစ်လုံးပြီးမှ နောက်တစ်လုံးပေါ့။ အစပိုင်းတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကို မသိဘူး ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို စုပ်ငုံပေးတဲ့ဖီလင်ကလေ အာ….မနေ့ကလူတွေ ၀ိုင်းပြုစုပေးတာထက်ကောင်းနေသလိုပဲ။ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့ ပြန်ပြီး မာတောင့်လာတာဆိုတော့ ဒီကောင်လေး ရွှေဥကိုကယုကယင်လုပ်ခြင်းအစွမ်းကမသေးပါဘူးနော်။
သူကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ကောင်းကောင်းသူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ဆွဲနေတာ ငါးမိနစ် ခြောက်မိနစ်လောက်ကြာတယ်။ ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ခပ်ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ခုလုံး သူ့လည်မျိုထဲထိထည့်တာ နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ သီးသလိုလိုဖြစ်သေးရဲ့။ နောက်တော့ သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ထိတဲ့အထိ တိုးကပ်သွားပြီး ခဏငြိမ်နေတာ သူ့အသက်ရှူငွေ့ပူနွေးနွေးလေးကိုတောင် ခံစားနေရသား။ သူ့ပါးစပ်ထဲကနေ လည်မျိုထဲထိ လျောကနေ လျောကနဲဝင်အောင် ကစားတာ သွက်သွက်လာတယ်ဗျ အိုး…..ဘာဖီလင်ပါလိမ့် ကောင့်လိုက်တာ။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို -ုပ်-ှုတ်နေတာ သုံးလေးမိနစ်လောက်အကြာမှာတော့သူ့အရှိန်နှုန်းကိုပိုမြှင့်သဗျ။ သူ ကျွန်တော့် -ိင်တံတစ်ချောင်းလုံးကို သူ့အာခံတွင်းထဲပျောက်ပျောက်သွားအောင် -ုပ်တာ ၈ ကြိမ် ၁၀ကြိမ်လောက်တော့မနည်းဘူး။ သိပ်မကြာဘူးဆို ပေမဲ့ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေက နောက်တစ်ကြိမ် ပန်းထုတ်ဖို့နီးကပ်လာရတယ်….အဲ သူလည်းသိနေတယ်လို့ပြောရမလားဘဲ။
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကျွန်တော့်-ိင်တံကို-ုပ်ထားပြီး အထက် အောက်ခေါင်းကိုကစားနေတာ ကျွန်တော့် ခြေထောက် တွေ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဟာ တွန့်လိန်မတတ် လူးလွန့်မိရပါတယ်။ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းများကနေလည်း ဘယ်လိုမှမထိန်းတတ်စွာ ညည်းညူသံကို ခပ်ကျယ်ကျယ်အော်မိရော။ သူ့လည်မျိုထဲထိတိုင်ရောက်အောင် ကျွန်တော့်ခါးကိုလှုပ် ရှေ့ကိုတိုးတိုးကစားမိတာမှာ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ကအရည်ကြည်တွေကို ရွှဲရွှဲစိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူက အရှိန်နှုန်းကို လုံးဝပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ပြီး တကယ့် ဖြေးဖြေးလေးကို ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ရော။ Fuckkkk…..သေတော့မှာပဲ ဒီကောင်လေးက ဆက်မ-ုပ်တော့ဘဲ ရုတ်တရက်ထရပ် ကာနောက်ဆုတ်လိုက်ရင်း တခြားသူတွေကိုလှည့်ပြောလိုက်တာက `တော်တော်-ုပ်လို့ကောင်းတဲ့ -ီးပဲ´တဲ့။
တော်တော်ကသိကအောင့်ဖြစ်သွားတာပဲ လူကိုဘာမှတ်နေတယ်မသိဘူး။ အဲ….မျက်မှန်ပါးပါးတပ်ထားတဲ့ အသားဖြူဖြူနဲ့လူ တစ်ယောက် ရှေ့တိုးလာပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို -ုပ်ဖို့လုပ်ပြန်ရော။ ပါးစပ်လေး မရဲတရဲဟကာ ကျွန်တော့်ငပဲကိုထည့်…ပြီးတော့ ငပဲခေါင်းကို လျှာနဲ့မွှေ့ပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းက အရည်ကြည်တွေရွှဲ ထွက်လုဆဲဆဲဆိုတော့ အထိအခိုက်မခံတာကြောင့် ခါးကို နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲက ကျွန်တော့်-ီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မိရဲ့။
`မင်း သောက် -ီးကို ဘာလို့ပြန်ဆွဲယူသွားတာလဲကောင်လေး!!!´ လန့်တောင်လန့်သွားတယ် ခဏနေကသူမဟုတ်သလိုပဲအော်လိုက် တာကလေ။ နောက်ကိုနည်းနည်းနောက်ပြန်ဆုတ် -ီးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီး မတ်မတ်ရပ်မနေတဲ့ ကျွန်တော် ခေါင်းမွှေးထောင်သွား ရပါတယ်။ `လာစမ်းပါကွာ ကောင်လေး မင်း-ီးကိုပြန်ထုတ်ပြစမ်း´တဲ့ သူက အမိန့်ပေးသလိုလို တောင်းဆိုသလိုလိုနဲ့ပြောပြန်တယ်။ ကျွန်တော် ခပ်ရွံ့ရွံ့ မလှုပ်တလှုပ်ဖြစ်နေတော့ သူ့လေသံက ချော့သလိုလိုအသံပြောင်းသွားပြီး `လုပ်စမ်းပါ ကောင်လေးရာ မင်းလက်တွေကို ဖယ်လိုက်´လို့ပြောပြန်ရော နောက်တစ်ခါ။ ကျွန်တော်လည်း အုပ်ကိုင်ထားမိတဲ့လက်တွေကိုဖယ် ကျွန်တော့်ငပဲ မမတ်တမတ်ကို ရှေ့သို့တိုးပေးလိုက်တယ်။ အိုး…..သူ့ပါးစပ်ကိုဟ ကျွန်တော့်ငပဲကို ရှလွတ်ကနေမြည်မတတ်-ုပ်မျိုလိုက်ကာ အရှိန်နှုန်းကို မြှင့်လိုက်တာ ရှေ့ကလူနှစ်ယောက်ထက်သာမတတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကို သူကလိပြန်တော့ အထိအခိုက်မခံတဲ့ ဧရိယာဖြစ်တာကြောင့် တင်ပါးတွေကိုကျစ် နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ သူ့ပါးစပ်ကနေ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆွဲနှုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကို ကလိလိုက်တိုင်း ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်လို့မရအောင်ဖြစ်ရတာ အမှန်ပါ။ ဒီလူက ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ကျွန်တော့်ခါးကို သူ့ဘက်ပြန်ဆွဲယူကာ ငပဲကိုကိုင်ပြီး အားရပါးရ -ုတယ်။ စိတ်ထဲက မျက်ကနဲဖြစ်ရတာမှန်ပေမဲ့ …`ငါ-ုပ်နေတယ်လေကွာ ပြန်ဆွဲမယူ သွားနဲ့´ဆိုတာကြောင့် ငြိမ်နေလိုက်ရတယ် သူလုပ်သမျှကိုခွင့်ပြုရင်းပေါ့။ ကျွန်တော် သတိပြုမိလာတာက ငပဲထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်းလေး ကိုထိရင် ကျွန်တော် အဆုံးသတ်မြန်တတ်တယ်ဆိုတာ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ခပ်မတ်မတ်ရပ်ရင်း သတိထားလိုက်ရရော။ အဲ့လူ နှုတ်ခမ်းက `Mmmm´ဆိုတဲ့ အသံရှည်မြည်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို သူ့အာခံတွင်းထဲအဆုံးထိဖိသွင်းလိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို ၈ကြိမ် ၁၀ကြိမ်လောက် ဆက်တိုက် -ုပ်လိုက်ပြီးနောက် အရှိန်နှုန်းကို ရုတ်တရက်လျှော့ချလိုက်ကာ သူ့လည်မျိုထဲထိ သွင်းနိုင်အောင် သူကြိုးစားရော။ ကျွန်တော့်သွေးကြောတွေထဲ တဖျပ်ဖျပ် ခုန်ပေါက်နေသလိုပဲခံစားရတယ် သူ့လှုပ်ရှားမှုက တမူထားပြန် တာမို့။ Oh My!!.... ကျွန်တော့်ငပဲ ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ဖောင်းပွက အရောင်ပြောင်းလာရင်း အဆုံးသတ်ဖို့နီးလာပြန်ပြီ။ Shit!! သူလည်း ရုတ်တရက်လုပ်နေတာတွေကို ရပ်တန့် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ကနေချွတ်ပစ်လိုက်ပြန်တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် မရတော့ဘူး ချိတ်မှာချိတ်ပေးထားတဲ့ ဘောင်းဘီတွေ အကျီတွေကိုဆွဲယူဝတ်ပစ်လိုက်မိပြီ။ ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားသံဝဲနေတဲ့လူကြီး လှမ်းအော်တာလဲ ဂရုမစိုက်မိဘူး တခြားသောလူတွေဆွဲဖက်တဲ့ လက်ကိုလဲ ပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘာတွေပါလာလဲ ဒီကိုလာတုန်းဆိုတာ တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး သန့်စင်ခန်းတံခါးမကြီးကို ဆွဲဖွင့်ကာ လှေကားထစ်တွေကို အပြေးလှမ်းတက်ပြီး ပြန်လာလိုက်မိပြီ။ ရှက်သွားတာလား ဘာလားမသိဘူးပေါ့ဗျာ။
အပ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးအသာခွ မြို့ထဲက သောက်နေကျအအေးဆိုင်ကိုသွားပြီး ငှက်ပျောသီး Milkshake တစ်ခွက်လောက် သောက်လိုက်ဦးမှပါဆိုပြီး မောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ….ဟဲ…ရင်လည်းခုန်ရပါတယ်။
`ဟုတ် အဖေ…..သားလာခဲ့မယ်….ဟုတ် ၀ယ်ခဲ့မယ်လေအဖေ ဒါပဲနော်´
ဟူး…..အဖေမှာတာလေးလည်းဝယ် သူစားဖို့လည်း တစ်ခုခုဝယ်သွားဦးမှပါ……..Love You Daddy.
Alex Aung (3 May 2014)